चितवन, १५ भदौ । चितवनमा गएको एक सातामा स्क्रब टाइफसका १७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् । ७० जना बिरामीको रगत परीक्षणमा १७ जना नयाँ रोगी भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । यसअघि भदौ पहिलो सातासम्ममा वैशाखयता १४५ जनामा सङ्क्रमण भएको पाइएको थियो । अहिले १७ जना थपिएसँगै बिरामीको सङ्ख्या १६२ पुगेको छ […]
Posted in समाज,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
अदृष्य शक्तिले धमाधम ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि पूरै गाउँमा त्रास
झापा,१४ भदौं । वैज्ञानिक युगलाई चुनौती दिँदै झापाको ज्यामिरगढी-९ गोमनसरीमा अदृष्य शक्तिले धमाधम ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि पूरै गाउँमा त्रास फैलिएको छ। करिब २ हप्तादेखि केही घरमा अचानक ढुङ्गा बर्सिन थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित हुन थालेका हुन्। स्थानीय ४ वटा घरमा नागपञ्चमीको दिनदेखि अचानक रात र दिनको समयमा सेतो ढुङ्गा बर्सिन थालेको छ। स्थानीय नरबहादुर निरौला, कमला […]
भीमदत्तनगर, १३ भदौ । कञ्चनपुरमा धानबाली रोपेको छोटो समयमै विभिन्न प्रकारका रोग देखिन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । खेती गरिएको अधिकांश धानबालीमा गबारो र पात बेरुवा रोग देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । माउ पुतली किराबाट लाग्ने रोगको सङ्क्रमण धानबालीमा फैलिँदै गएको छ । किसानले धानबालीमा पात सुक्न थालेका र बोटको […]
खोटाङ, १२ भदौ । जिल्लाका गर्भवती महिला आफ्नो गर्भ जाँच गराउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा सञ्चालित एकमात्र भिडियो एक्स–रे मेसिनसमेत बिग्रिएपछि गर्भवती महिला आफ्नो गर्भ जाँच गराउनबाट वञ्चित भएका हुन् । विद्युत्को हाइभोल्टेजका कारण अढाइ महिनाअघि बिग्रिएको एक्स–रे मेसिन पुनः सञ्चालन गर्न नसक्दा गर्भ जाँच गराउनबाट वञ्चित भएका अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक रामबहादुर […]
यात्रुलाई सास्ती -सय भाडा लाग्ने ठाउँमा हजार रुपैयाँ
चरीकोट, ११ भदौं । दोलखाको लापिलाङ गाविस ६ की अम्बिका भण्डारी बिहीबार चरीकोटमा यताउता भौतारिँदै थिइन् । संस्थाको कामको लागि गाउँबाट चरीकोट आएकी भण्डारी आमा बुबा बिरामी भएको खबर सुनेपछि हस्याङफस्याङ गर्दै कोठाबाट बजार झरेकी हुन् । बजार झरेर उनी गाउँ जाने बोलेरो खोज्न थालिन् । बोलेरो त पाइन् तर बेहोस हुने भडादर सुनेपछि केही […]
नवजात शिशुको हत्यारा जोडीलाई जन्मकैद
पर्वत, १० भदौ । अवैध गर्भधारणपछि जन्मेको शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा पर्वत जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका प्रेम जोडीलाई पर्वत जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । पर्वतको नाङ्गलिबाङ्ग–४ की १८ वर्षीया सङ्गीता रेग्मीलाई शिशु हत्यामा जन्मकैदको फैसला गरेको हो भने उनका प्रेमी बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाका १९ वर्षीय मनोज बोहोरालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको हो । पर्वत […]
पैदल १० मिनेट लाग्ने बाटोमा गाडिमा एक घण्टा, यता ध्यान देउ सरकार !
काठमाडौं, ९ भदौ । तपाईले १० मिनेटमा हिँडेर कति बाटो पार गर्नुहुन्छ र ? एक किलोमिटर त सजिलै हिँड्न सक्नुहुन्छ । हो तर त्यही १० मिनेटमा हिँडेर पार गर्न सकिने दुरीलाई गाडि वा आफ्नो साधनमा १ घण्टा लगाएर पार गर्नुपर्दा कस्तो लाग्छ । हो यस्तै भएको छ राजधानी काठमाडौंमा । काठमाडौंको मुख्य प्रवेशद्धार कंलकीबाट नागढुंगा […]
आज कृष्ण जन्मअष्टमी, ललितपुरमा जात्रै जात्रा
ललितपुर, ९ भदौ । हिन्दुहरुले अत्यन्तै शक्तिशाली र चलाख देवताको रुपमा मान्दै आएका भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको दिनको सम्झनामा आज देशभरका कृष्ण मन्दिरहरुमा पूजा आराधना गरेर कृष्ण जन्माअष्टमी मनाईंदै छ । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा विहानैदेखि श्रद्धालुहरुको घुईंचो लागेको छ । गत वर्षको भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको कृष्ण मन्दिर जीर्णोदवारका क्रममा रहेकाले मन्दिरसँगै कृष्णको पादुका […]
विदेशी युवाले बनाइदिए ८ लाखभन्दा वढिको स्वास्थ्य चौकी भवन, गाउँलेले गरे सम्मान ।
श्यामशीत्तल परियार लमजुङ, भाद्र फ्रान्सबाट आएका विद्यार्थीहरुले ८ लाख भन्दा वढि रकम खर्चेर अर्चलबोट गाविस वडा नं ७ मा दुई कोठे पक्की स्वास्थ्य चौकी भवन बनाएर समुदायमा हस्तान्तरण गरेका छन् । एसएफएनका स्वयमसेवकहरुले दुई महिनासम्म अहोरात्र आफैँ खटी सो घर बनाएका हुन् । उनीहरुले सो भवन अर्चलबोट स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । फ्रान्सबाट आएका […]